Junior Oo Real Madrid Ku Hogaamiyay Champion-kii 14-aad Taariikhda , Liverpool Ayay Ka Qaadeen - Radio somit
Junior Oo Real Madrid Ku Hogaamiyay Champion-kii 14-aad Taariikhda , Liverpool Ayay Ka Qaadeen
Real Madrid ayaa ku guuleystay Champion-ka ka dib markii hal gool ku garaaceen Liverpool kuwaasi oo birta iyo goolyahe Thibaut Courtois uu hor istaagay, waxa uuna Real u yahay koodii 14-aad taariikhda .
Real rogaal celis ayay ku tiirsanaayeen mana aheyn halis gilin muuqata xilli halka fursad xaqiiq ay heleen dhamaadkii oo gool uu Benzema dhaliyay ayaa Var ay diiday .
Real waxa ay ka faa`ideysteen ciyaartooyda Liverpool oo banaanka aad ugu soo baxayay waxa ayna heleen gool uu dhaliyay JR waxaana soo baasay Valverde iyadoo goolkaas uu dhashay daqiiqadii 59-aad
Liverpool kaliya waxaa dilayay go`aan qaadasho deg deg ah balse cadaadis ahaan waa ay fiicnaayeen xilli Real daqiiqadii 76-aad ku dhawaadeen gool balse si sax ugama aysan faa`ideysan .
Previous articleReal madrid iyo Liverpool? Steven Gerrard Oo Saadaaliyay Final-ka Champions League.
Next articleAgaasimayaha guud ee Villa Somalia iyo ku xigeenkiisa oo xilalkii la wareegay